मनोरञ्जन – Page2– SidhaRekha
२०७४ फाल्गुन ६, आईतवार ००:०५२०७४ फाल्गुन ६, आईतवार ००:०५२०७४ फाल्गुन ६, आईतवार ००:०५ by Sidharekha Online
संसारमा व्हिस्की सबैभन्दा महँगो मदिराजन्य पेय पदार्थ मानिन्छ । विशेष गरेर व्हिस्कीको कुनै बोतलको मूल्य निर्धारणका दुई विधि रहेका छन् । पहिलो, केही बोतलहरू जति पुराना भए त्यति महँगा हुन्छन भने अर्को, केही व्हिस्कीहरू दुर्लभ र विशेष भएका कारण पनि महँगा हुन्छन् । कुनै कुनै भने ब्रान्डको नामैले या बोतलको गुणस्तरका कारणले मात्रै पनि मुल्यवान रहेका हुन्छन् । यदि संसारकै महँगा व्हिस्कीहरूको कुरा गर्ने हो भने कतिसम्म मूल्य तिर्न तयार होलान त पारखीहरू ? यदि संसारकै सबैभन्दा महँगा व्हिस्की बोतलहरूको कुरा गर्ने हो भने यस सूचीको शीर्षमा पचास वर्ष पुरानो ‘बाल्भेनी स्पेसाइड सिंगल माल्ट व्हिस्की’ पनि रहेको छ । यस उच्च स्तरीय मदिराको प्रति बोतलको मूल्य ३६ हजार अमेरिकी डलर पर्दछ । यदि गोजी केही हलुको छ र यतिविधि महँगो रक्सी किन्न सकिँदैन, केही सस्तैले काम चलाउने हो भने पनि विकल्प छ । त्यस्तो अवस्थामा
२०७४ माघ २५, बिहीबार १३:०२२०७४ माघ २५, बिहीबार १३:०२२०७४ माघ २५, बिहीबार १३:०२ by Sidharekha Online
बलिउडका चर्चित नायक सलमान खान नेपाल आउँदैछन् । मार्च १० मा आयोजना हुन लागेको ‘दबंग टुर’मा उनी आफ्नो टिमसहित नेपाल आउँदैछन् । सलमानको यो शो हेर्नका लागि ५० हजार दर्शक हुने अपेक्षा आयोजक ओडीसी गुप्रले गरेको छ । तर, यो शोका लागि नेपाली चलचित्रका चर्चित नायिकाहरुलाई सित्तैमा कोरस नृत्यका लागि प्रस्ताव गरिएको दाबी गरे । जुन, प्रस्तावलाई नेपाली नायिकाहरुले अस्विकार गरेको बताए । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले आयोजक ओडीसी नेपालसँग सम्पर्क गर्दा ‘कुनैपनि कलाकारलाई निशुल्क रुपमा नृत्यको लागि प्रस्ताव नगरिएको’ जिकिर गरे । नायिका प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का र मोडल एलिसा राइलाई सलमानसँग कोरस नाच्नका लागि अफर गरिएको ति अभिनेत्रीहरुले बताए । सेलेब्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीले यो कार्यक्रमको लागि नेपाली सेलिब्रेटीको व्यवस्थापन मिलाउनेे जिम्मा लिएको छ । वुझिएअनुसार ८ जना नायिकालाई यो अफर गरिएको थियो ।
२०७४ पुष २९, शनिबार १७:२८२०७४ पुष २९, शनिबार १७:२८२०७४ पुष २९, शनिबार १७:२८ by Sidharekha Online
सात बलिउड फिल्म, जसले निर्माताको भाग्य चम्काए
बलिउडको २०१७ को रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक भइसकेको छ । कमाइका आँकडाहरूले ‘टाइगर जिन्दा है‘को दबदबा देखाए पनि सबैभन्दा बढी प्रतिशत मुनाफा कमाउने सात चलचित्रमा भने यो पर्न सकेको छैन । आखिर को हुन त निर्माताको भाग्य चम्काउने सात बलिउड चलचित्र ? हेरौँ ती फिल्म : बाहुबली-२ चार सय ६३ प्रतिशत मुनाफा कमाएर राजामौली निर्देशित म्याग्नस ओपस बाहुबली-२ भारतको आजसम्मकै सर्वाधिक कमाउने चलचित्र पनि हो । ट्वाइलेट- एक प्रेमकथा कुल २४ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा बनेको यस फिल्मले बक्स अफिसमा लगभग एक सय ३४ करोड कमाएको थियो । यसले लगभग चार सय ५७ प्रतिशत मुनाफा कमाएको देखिन्छ । फुकरे रिटर्न्स कुल २२ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानीको यस चलचित्रले बक्स अफिसमा अस्सी करोडभन्दा बढी कमाएर दुइ सय ६४ प्रतिशत मुनाफा कमाइसकेको छ । हिन्दी मिडियम सामाजिक र शैक्षिक मुद्दालाई विषयवस्तु बनाएर निर्माण गरिएको यस चलचित्रक
२०७४ पुष २९, शनिबार १७:११२०७४ पुष २९, शनिबार १७:११२०७४ पुष २९, शनिबार १७:११ by Sidharekha Online
सलमान खान मार्च ९ मा नेपाल आउने
काठमाडौं । अभिनेता सलमान खान सांगीतिक कार्यक्रम ‘दबंग द टुर’ अअन्तर्गत नेपाल आउने पक्का भएको छ । यसअघि सलमान नेपाल आउने चर्चा भएपनि निश्चित भने भएको थिएन । सलमान खान आफैले ‘टाइगर जिन्दा है’ बारे बलिउड हंगामासँग कुरा गर्दै दबंग द टुर मा नेपाल पनि सेड्युलमा रहेको बताएका हुन् । सलमान सन् १९९४ पछि दोस्रोपल्ट नेपाल आउन लागेका हुन् । उनी मार्च ९ को बिहान काठमाडौं आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी तीन दिनका लागि नेपाल आउन लागेको आयोजक ओडीसी इन्टरटेनमेन्टले जनाएको छ । कन्सर्टको लागि सलमान मार्च ९ मा नेपाल आउने सलमान तीन दिन नेपाल बस्नेछन् । सलमान ११ मार्चमा पुनः मुम्बई फर्किनेछन् । ‘दबंग द टुर’ मार्च १० अर्थात फागुन २६ मा टुडिखेलमा हुनेछ । मार्च १० मा हुने कार्यक्रमको लागि १२ बजेबाट नै गेट खुल्ला गरिने बताइएको छ । सलमान साढे ६ बजे स्टेजमा देखा पर्ने छन् । सलमानसँगै कार्यक्रममा नायिक
२०७४ पुष २६, बुधबार १७:४८२०७४ पुष २६, बुधबार १७:४८२०७४ पुष २६, बुधबार १७:४८ by Sidharekha Online
काठमाडौं । नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रमा दृष्य सम्पादनलाई आफ्नो पेशा बनाएर प्रवेश गरेका व्यक्तिको नाम हो बिरेन्द्र भाट ‘बिपिन’ । सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्ला गुजरमा जन्मेका विपिनले अहोरात्र यसै क्षेत्रमा खटेर कम्प्युटरको किबोर्डमा चल्ने हातहरुलाई त्यतिमा मात्र सिमित राखेनन् । अरुले खिचेर ल्याएका दृष्यका सटहरु काट्दा र जोड्दाका अनुभव संगालेका उनी आफैं क्यामराको लेन्स घुमाउँदै फ्रेम बनाउँन थाले जसले सम्पादक बिरेन्द्रलाई कुशल छायाँकारको रुपमा पनि स्थापित बनायो । हरेक मान्छेको चाहना एउटा सफलताबाट अर्को हुँदै सफलताको सिंढी खोज्न मै बित्ने गर्दछ तर बिरेन्द्रको अनुभव खोजाईमा मात्र बितेन । आफु उक्लिएका हरेक सिंढीहरुमा उनी सफल बन्दै गए र कुनै बेलाको केवल एउटा भिडियो सम्पादक परिचय अहिले फेरिएको छ । सम्पादक र छायाँकारको परिचय बोकेका बिरेन्द्रले अहिले आफ्नो परिचय निर्देशकमा पनि दर्ता गराउँन सफल भएका छ
२०७४ मंसिर १३, बुधबार १७:५९२०७४ मंसिर १३, बुधबार १७:५९२०७४ मंसिर १३, बुधबार १७:५९ by Sidharekha Online
काठमाडौँ । नेपाली लोकबाजा संग्रहालयद्वारा आयोजित सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय लोकसंगीत फिल्म महोत्सवमा सुदूरपश्चिमको एक साङ्गीतिक जोडी सम्मानित भएको छ । यही मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म भएको बृहत् वृत्तचित्र प्रदर्शनी अर्थात् लोकसंगीत फिल्म महोत्सवमा सुदूरपश्चिमेली गायक शङ्करसिंह बिष्ट र चाँदनी मल्ल सम्मानित भएका हुन् । सो कार्यक्रममा शंकरसिंह बिष्टको निर्देशनमा रहेकोे SACRED MUGIC OF THE GODDESS” ले SPECIAL CONSERVATION AWARD पाएको छ भने “SHAKTI”THE DIVINE FEMAL POWER AMATEUR FILM AWARD द्वारा गायिका तथा सञ्चारकर्मी चाँदनी मल्ल सम्मानित भएकी हुन् । राष्टिय नाचघर जमलमा ४ दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा नेपाल, भारत, अमेरिका, क्यानडा, जापान, फिलिपिन्स, भुटान, जिम्बाबे, फ्रान्सलगायत १७ वटा देशका ३२ वटा फिल्म मध्ये १८ वटा फिल्मले अवार्ड हात पारेका छन् । नेपाली लोकसंगीत, लोकगीत, लोकबाजा, लोकनाच, लोक
२०७४ कार्तिक ७, मंगलवार ०९:३८२०७४ कार्तिक ७, मंगलवार ०९:३८२०७४ कार्तिक ७, मंगलवार ०९:३८ by Sidharekha Online
सोनी टिभीको चर्चित कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोडपति’ बन्द हुँदै
नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । सोनी टिभीको चर्चित कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोडपति’ (केबिसी) बन्द हुने भएको छ । बलिउडका सुप्रसिद्ध नायक अमिताभ बच्चनले सञ्चालन गर्दै आएको यस सोको अन्तिम एपिसोड सोमबार प्रसारण हुनेछ । कार्यक्रम बन्द हुन लाग्दा यसका प्रशंसकसँगै सञ्चालक अमिताभ पनि दुःखी छन्।अमिताभले सन् २००० मा सुरु भएको यस शो प्रति माया दिने दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् । '१७ वर्षअघि यस शो ले इतिहास रचेको थियो र तपाईंले फेरि पनि यस्तो इतिहास रच्न सहयोग गर्नुभयो । यो कुनै सानो काम थिएन।' सिजन ९ को अन्तिम एपिसोड आउनु अगाडि अमिताभले ट्विट गर्दै कार्यक्रमसँग जोडिएका सबैसँग टाढा हुनुपर्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै यसलाई दुःखद भनेका छन्। केबिसीको सिजन-९ समापन हुने अवसरमा अमिताभले भनेका छन्, 'केबिसीसँग जोडिएका ४ सय ५० जनाको टिमले मिहिनेतपूर्वक काम नगरेको भए शो कहिल्यै यति सानदार हुने थिएन।'
२०७४ आश्विन २७, शुक्रबार १६:१०२०७४ आश्विन २७, शुक्रबार १६:१०२०७४ आश्विन २७, शुक्रबार १६:१० by Sidharekha Online
बैतडी । लामो समय पुष्करसंग प्रेममा रहेकी मनिषाले उनलाई धोका दिएर राजेन्द्रसंग बिबाह गरेकी छिन् । लामो समयसम्म प्रेममा रहेकी प्रेमिकाले एक्कासी अर्कैसंग विवाह गरेर गएपछी कसको मन नरोला र? त्यस्तै भएको छ पुष्करलाई पनि । राजेन्द्रसंग बिबाह भएपछी भक्कानिंदै मनिषालाई पुष्कर भन्दैछन्: 'हे मैना चडी मलाई छाडी तैंत गई अर्काई डोली ।' मनिषासंग पुष्करको गुनासो छ: 'यो जिन्दगी तुईको भन्थी, मायामा घात गरि, मैलाई छाडी नदी किनार तैंले त पार गरी ।' यो जिन्दगीमा आफ्नो बनाउन नसके पनि उनी मनिषासंग भन्दैछन्: 'निक्केरी खाएई मैना अर्का जन्म मेरी होलि ।' यो कसैको जीवनमा घटेको घटना नभई डेउडा गायन क्षेत्रमा सर्वाधिक लोकप्रिय गायक दीपक कोली 'प्यासी'को सुमधुर स्वरमा रहेको गीतको म्युजिक भिडियोको अंश हो । उक्त म्युजिक भिडियोमा पुष्कर बिष्ट, मनिषा कटुवाल र राजेन्द्र बिष्टको अभिनय रहेको छ । “तैत गई अर्काई डोली”
२०७४ आश्विन २४, मंगलवार ०९:५२२०७४ आश्विन २४, मंगलवार ०९:५२२०७४ आश्विन २४, मंगलवार ०९:५२ by Sidharekha Online
लोकेश साउद, बैतडी । बैतडीको सिमावर्ती नाका झुलाघाँटमा बलिउड फिल्म छायांकन हुने भएको छ । बलिउडका स्टार नायक अर्जुन कपूर तथा नायिका परिणीति चोपड़ाको अभिनयमा निर्माण हुन लागेको फिल्म ‘सन्दीप और पिंकी फरार’को छायांकनका लागि निर्माण समुहले बैतडी प्रशासनबाट अनुमती मागेको छ । फिल्म निर्देशक दिबाकर बेनर्जीद्वारा निर्देशित फिल्म ‘सन्दीप और पिंकी फरार’को छायांकनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीसँग अनुमती माग गर्दै पत्र पठाएको हो । नेपाल भारत सिमाना झुलाघाँटमा भारतको जन्ती नेपाल आउँदै गरेको दृष्य छायांकन हुने र उक्त दृष्य फिल्मको लागि निकै महत्वपूर्ण भएको निर्माण समुहले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । झुलाघाँट पुलमा छायांकनका लागि भारत प्रशासनले अनुमती दिइसकेपनि नेपालको अनुमती पाउन कठिन हुने देखिएको छ । बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले स्थानीय प्रशासनले अनुमति दिन नमिल्ने र आफू
२०७४ आश्विन ७, शनिबार ०७:१८२०७४ आश्विन ७, शनिबार ०७:१८२०७४ आश्विन ७, शनिबार ०७:१८ by Sidharekha Online
काठमाडौं, पोखराका बुद्ध लामा पहिलो नेपाल आइडल बनेका छन् । कतारको दोहास्थित ग्राण्ड मलमा शुक्रबार राति भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा दर्शकको भोटिङको आधारमा लामा नेपाल आइडल घोषित भएका हुन् । प्रतियोगितामा इटहरीका निशान भट्टराई फस्ट रनरअप र काठमाडौंका प्रताप दास सेकेण्ड रनरअप घोषित भए । तीन उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीबाट विजेता चयन गर्न दर्शकहरुले ९ करोड ३१ लाख ८३ हजार ३ सय ३५ भोट गरेकोमा लामाले मात्र ४ करोड ४८ लाख ४५ हजार २ सय ६३ भोट पाएका थिए । जितसँगै उनले २ लाख रुपैयाँ नगद, महिन्द्रा केयूभी १०० कार र १५ लाख रुपैयाँ बराबरको एल्बम कन्ट्र्याक पाएका छन् । त्यस्तै मोरङ उर्लाबारीका निशान भट्टराई फस्ट रनर अप भए भने ललितपुर झरुवाराशीका प्रताप दास सेकेन्ड रनर अप भए । निशानले ३ करोड ५० लाख ५६ हजार २ सय २३ भोट पाए भने प्रताप दासले १ करोड ३२ लाख ५१ हजार ८ सय ४९ मत पाए। फस्ट रनर अप भट्टराईले १५ लाख रुपैया